Weerar Islaam nacayb ah oo lala beegsaday Masjid ku yaala Koonfur-galbeed ee dalka Holland - Horn Future
Amsterdam(Horn Future)-Masjid ku yaala Koonfur-galbeed ee dalka Holland oo wali dhisme ku socdo ayaa waxa beegsaday koox katirsan xag-jirka mididgta-fog,sida uu warbaahinta u sheegay madaxa masjidkan.
Kooxdan xagjirka midigta-fog ee lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa ”Identitair Verzet ‘ayaa waxay shudeen qoraalo ka dhan ah Islaamka saqafka sare ee masjidka (Tevhid) oo uu ku socda dhismo kaas oo ku yaala magaalada Venlo.
Ahmet Dursun oo ah madaxa masjidka Tevhid ayaa mar uu la hadlay wakaaladda wararka ee Anadolu cambaareeyay dhacdadan,isaga oo sheegay inay jiraan xagjir tiro badan oo ku nool xaafadooda ,laakiinse uunan filaynin weerarka nuucaas ah.
Waxa masuulkani uu sheegay in wadahadal ay la yeesheen gudoomiyaha magaaladda iyo mas’uuliyiin kale,iyada oo uu tilmaamay inay taageeraan.
Waxa sido kale uu intaa ku daray inay qaadi doonaa tallaabooyin lagama maarmaan ah si aynan mar labaad ula kulmin dhacdooyinkan oo kale
Kooxdan sheegatay mas’uuliyadda dhacdadan ayaa waxay ku qortay marooyinkan ay shuday hadalo ay kamid yihiin “Ka fogow, Netherland annagaa leh,Ma dooneyno masjid iyo muslimiin inay ka jiraan xaafadeena ” oo lagu qoray afafka Turkish ka iyo Dutch ka.
Waxa sidoo kale kooxdani ay ku faafiyeen muuqaaladan golayaasha xidhiidhka bulshada,waxayna sheegteen inay qabsadeen masjidkan.
Ururka PEGIDA oo ah dhaqdhaqaaq ka jira Yurub oo ka horjeeda Islaamka ayaa waxa uu kula kacay falal halis ah masjidka Selimiye oo dhisme ku socdo oo kuyaala magaaladda Veghel iyo dugsi hoose oo ku yaala Leiden ee dalka Holland.
« Hoggaamiyaha macaaradka Kenya Odinga oo sheegay in uunan oggollaan doonin awood qaybsi	» Ankara slams anti-Turkish campaigns in Germany, Austria